एमाले संसदीय दलको बैठक सुरु , नेपाल समूहका सांसद गए कि गएनन् ? — Imandarmedia.com
एमाले संसदीय दलको बैठक सुरु , नेपाल समूहका सांसद गए कि गएनन् ?
काठमाडाैं । नेकपा (एमाले) को संसदीय दलको बैठक अहिले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा बसिरहेको छ। संसद भवनको ल्होत्से हलमा जारी बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरू भने उपस्थित भएका छैनन्।
नेपाल पक्षीय सांसदहरूले कोरोना परीक्षणका लागि संसद भवनमा गएका थिए तर उनीहरू बैठकमा सहभागी भएनन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम बैठक सुरू हुनै लाग्दै संसद भवनबाट बाहिरिएका थिए।
यसअघि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरूमात्रै सहभागी भएको स्थायी कमिटी बैठक बसेको थियो। उक्त बैठक रोक्न भनेर नेपाल समूहका नेताहरू गए पनि अध्यक्ष ओलीले मानेका थिएनन्।
उक्त बैठकले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ। बैठकले सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको सरकारको जनमतमा वैधानिकता नरहेको ठहर गर्दै समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
एमालेले अलोकतान्त्रिक र अस्वस्थ विधिबाट गठित सरकारलाई समर्थन नगर्ने र विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । एमालेले पार्टीका सबै प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुलाई यो निर्णयको पालना गर्न निर्देशन समेत दिएको छ ।
ज्ञवालीले एमाले सशक्त प्रतिपक्षका रूपमा रहने र अदालतको आदेशबमोजिम विश्वासको मतमा मतदान गर्नेहरूको निर्णय व्यक्तिगत हुने बताए ।
ज्ञवालीले भने, ‘पार्टीले प्रतिपक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ । कोही साथीहरु सरकारको पक्षमा उभिनु हुन्छ भने सर्वोच्च अदालतले त्यो बाटो खुला गरिदिएको छ उहाँहरु जान सक्नुहुन्छ । तर पार्टीले सबै प्रतिनधिसिभा सदस्यलाई विश्वासको मत नदिन निर्देशन गरेको छ ।’
कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई एमालेका कुनै सांसदले समर्थन गरे त्यो व्यक्तिगत निर्णय हुने ज्ञवालीले बताए । एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षले गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने संकेत गरिसकेको छ ।